ဟာသ၊ ဥာဏ်စမ်း / အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ )
« Last post by mgbanana on May 25, 2015, 03:27:20 PM »
တစ်နေ့သ၌ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်သည် ငါးမျှားရန်အတွက် တောစပ်အနီး စီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းဆီသို့ ဦးတည်ကာ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ကြပါသည်။ ချောင်းဆီသို့ ရောက်လျှင် သုံးယောက် အနက်တစ်ယောက်မှာ ကမ်းစပ်ဆင်း၍ ငါးမျှားလေတော့ရာ ကျန်နှစ်ယောက်မှာ ထင်းရှာ၍ ကုန်းပေါ်၌ မီးမွှေးလေတော့၏။
ငါးမျှားနေသူမှာ ငါးရလျှင် ကျန်နှစ်ယောက်ကို ကင်ထားရန် ငါးများကိုပစ်ပေး၍ ဆက်လက်ပြီး ငါးမျှားနေ လေသည်။ ကျန်နှစ်ဦးမှာ မီးထိုးလိုက် ငါးကင်လိုက်နှင့် ငါးကင်များကျက်လျှင် စကားတပြောပြောနှင့် ငါးကင်ကို ထိုင်မြည်းနေလေတော့သည်။ ထိုသို့ ငါးများကိုကင်ရင်း စကားတပြောပြောနှင့် စားနေကြသောကြောင့် အတော်လေးကြာလာလျှင် ငါးအားလုံး ကုန်သွားလေတော့သည်။
ညနေစောင်း ရောက်လတ်သော် ငါးမျှားနေသူမှာ အတော်ပင် ဗိုက်ဆာလာသောကြောင့် ငါးမျှားတံကို သိမ်းကာ ငါးကင်စားရန် ရေကမ်းစပ်မှ တက်လာခဲ့လေ၏။ ကုန်းပေါ်သို့ရောက်လျှင် ငါးကင်အားလုံးကုန်နေ၍ ကြွင်းကျန်သော အရိုးများကိုသာ တွေ့ရ ပြီး ဗိုက်လည်း ဆာနေသောကြောင့် တော်တော်တင်းသွားပြီး…
“ငါ့လီး… စားတော့ မင်းတို့ကောင်တွေ… ”
“မင်းမေစောက်ပတ်… လုပ်ရတော့ ငါ့တစ်ယောက်တည်း… ” ဟု ဆဲရင်း ပြောလိုက်လေသတည်း။
« Last post by မင်းခေါင် on May 25, 2015, 12:22:10 PM »
ကျမက . သရက်သီးပါ မောင်
ငပိနဲ့ ပဲ စားစား
မောင့်ပါးစပ်မှာ ကျမဖင်က အစေးတွေ
မကပ်စေချင်လို့ ပါ မောင်.....
ကျမရဲ့ အသားကို အားရအောင် စားပါမောင်
အသားစားလို့အားမရရင်..အစိ စုပ်လဲ စိတ်မဆိုးပါဘူး..မောင်..........
အစိစုပ်လို့သွားကြားမှာ အမွှေးညပ်ရင် ကျမကို စိတ်မဆိုးရဘူးနော်..မောင်......
« Last post by မင်းခေါင် on May 25, 2015, 10:53:14 AM »
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ဖွင့်လှစ်သော နိုင်ငံခြားအခြေစိုက် ကုမ္မဏီတစ်ခုသို့မောင်မင်းခေါင် အင်တာဗျူး သွားဖြေသည် ။
အင်တာဗျူးသူ....Your name ?( နာမည် )
မောင်မင်းခေါင်..min khaung ( မင်းခေါင် )
အင်တာဗျူးသူ..sex ( လိင်အမျိုးအစား )
မောင်မင်းခေါင်.Three timesaday ( တစ်နေ့ သုံးကြိမ်လောက်တော့ လုပ်ဖြစ်တယ်..)
အင်တာဗျူးသူ..I mean male or female .( ဟုတ်ဖူးလေ..ယောင်္ကျားလား မိန်းမလားလို့ မေးတာ )
မောင်မင်းခေါင်.Dosen't matter . ( ကိစ္စမရှိဘူး..ဘာလာလာ အကုန်ဝုန်းတယ်..)
« Last post by မင်းခေါင် on May 25, 2015, 10:43:46 AM »
အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ပါတီမှာ အရက်ကို လူမှန်းမသိအောင်သောက်ပြီးမူးနေတဲ့အပြင် ပင်လယ်စာတွေကိုလည်း တ၀ကြီးစားပြီး
အိမ်ကို ကားမောင်းပြန်လာတယ်တဲ့ ။ လမ်းခုလပ်ရောက်တော့ အမျိုးသမီး ၂ ယောက်လုံး အသည်းအသန် ၀မ်းသွားချင်လာကြတယ်.။
အဲ့ဒါနဲ့ အနီးဆုံး သင်းချိုင်းထဲကို ၀င်ပြီး အီအီးပါကြသတဲ့..။ သူတို့ပါတဲ့နေရာကလည်း နေ့လည်ကမှ မီးသတ်ရဲဘော်တစ်ယောက်သေသွားလို့ 
မြုတ်ထားတာ ပန်းခွေရော..ပန်းခြင်းတွေရော ပွနေတာပဲတဲ့..။
ကိစ္စလည်းပြီးရေ အမျိုးသမီး၂ ယောက် ဒုက္ခရောက်ပါလေရော..။ သူတို့ မှာ တစ်ရှူးမပါ ဘာမပါနဲ့ ..အီအီးကုန်းစရာ ဘာမှ မရှိဘူးလေ..။
ဒေစီကတော့ အလွယ်တကူပဲ.သူ့ ရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ အီးကုန်းပစ်လိုက်တယ်တဲ့..။မေရီကတော့ သူ မရဲ့ ဘောင်းဘီက အသစ်စက်စက်ကြီး
ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတယ်ဆိုပြီး ခုနက မီးသတ်ရဲဘော်ရဲ့ ပန်းခွေကစရွက်နဲ့ အီးကုန်းလိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သား အသီးသီး အိမ်ပြန်ကြသတဲ့..။
တအောင့်လောက်ကြာတော့ ဒေစီရဲ့ ယောင်္ကျားက မေရီရဲ့ ယောင်္ကျားဆီ ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်..။
" ဟေ့ကောင်ရေ..င့ါရဲ့ မိန်းမကတော့ အခြေအနေ မဟတ်ဘူးဟေ့..ပါတီက ပြန်လာတာ အတွင်းခံဘောင်းဘီတောင် ပြန်ပါမလာဘူးကွ.." လိုလဲ
ပြောရော..မေရီ့ ယောင်္ကျားက " မင်းမိန်းမကမှ တော်ပါသေးတယ်..ငါ့မိန်းမဆို ဖင်ကြားမှာ ဂုဏ်ပြုစာတေင်ညှပ်ပေးလိုက်သေးတယ်..ဘာတဲ့..
ကျွန်ုပ်တို့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များအားလုံးက သင့်အား ဒီတသက် မေ့နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ...တဲ့ကွ..."
« Last post by SnowFlake on April 01, 2015, 10:57:59 PM »
တစ်ခုသော သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်၌ စီနီယာ ကျောင်းတော်သား ကိုမင်းခေါင်တို့ ကြင်စဦး
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်.. ပူပူလောင်လောင် နေ့ခင်းကြောင်တောင်တွင်
ချွေးတရွှဲရွှဲ ထွက်ကာ (…၁…) လုံး နေကြ လေသည်။
“ကိုကို့.. (…၂...) ကို နယ်ပေး လက်နဲ့..”
“အင်းးး.. ရပြီလား ဒီလောက်ဆို..”
“အာ ကွာ.. နဲနဲ အားစိုက်ပြီး ချေပေးပါ ကိုကိုရဲ့ ဘယ့်နှယ် မထိတထိနဲ့..”
“ဒီလိုလား.. အွန့် အွန့်.. ရပြီလား..”
“ရသေးဝူး.. ညှစ်ညှစ်ပြီး ချေပေးးး.. လက်ဖနောင့်နဲ့ ဖိဖိ ပွတ်.. အွန်းး.. ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် အာ့လိုမျိုး..”
“ချစ် (…၂...) လေးက စီးးးပြီး အိနေတာပဲကွာ.. ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. ”
“လုပ်ရအောင် ကိုကိုရယ်.. နော်.. ကိုကို့ (…၃…) အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား..”
“အွန်းးး.. ကြာ ပေါ့ ဆင်သင့် ဖြစ်နေတာ.. တန်း ထည့်ရုံပဲ..”
“အာ.. ကိုကို့ (…၃…) ကြီးက ကြီးလွန်းတယ်ကွာ..”
“ကြီးမှ အရသာ ပေါ်မှာပေါ့ ချစ်ရဲ့.. ဟုတ်ဘူးလား..”
“ကွဲ ထွက် ကုန်မှာပေါ့ လို့.. ဟွန့် ဂယ်ဘဲ.. ”
“သေချာ ထိန်း ထည့်မှာပေါ့ ချစ်ရဲ့.. စိတ်ချပါ.. ကိုကို့ ချစ် (…၁…) လေး ပုံမပျက်စေရပါဘူး..”
“ဖြည်းဖြည်း လုပ် ဆို.. ကိုကို့.. အိုးးး အ.. တွေ့လား.. တကယ် ကွဲကုန်ပြီလား မသိဘူး..ဟင့်..”
“ကွဲပါဘူး ချစ်ရယ်.. ကဲကဲ (…၄…) ထဲ တခါတည်း အကုန်ထည့်ပြီနော်..”
“ဆန့် ပါ့ မလားးး လို့..”
“ဆန့်ပါ တယ် ကွာ.. ချစ်ကလည်း..”
မိနစ် အနည်းငယ် ကြာသော်…
“ကိုကို့ ပြီးသေးဘူးလား.. ပြန်ထုတ်တော့ ကွာ..”
“ပြီးပါပြီ ချစ်ရဲ့.. ကိုကိုလည်း ထုတ်တော့မလို့ပါပဲ.. ဟောဗျာ.. အာာ အာာ..”
“အင်.. ဟင်.. ဟင့်ဟင့်.. တွေ့လား အကုန် ကွဲပြဲပြီး အရည်တွေ ထွက်ကုန်ပြီ..
အာ့ဒါ ကိုကို့ကြောင့်.. ကိုကို့ (…၃…) ကြီး ကြီးလွန်းလို့ ချစ် (…၁…) တွေ ကွဲပြဲ ကုန်တာ..
ကိုကို လူဆိုးကြီး.. သွား.. ”
“အာ.. ချစ်လေးကလည်း ကွာ.. ချစ်ရဲ့ (…၂…) ကလည်း ပျော့လွန်းတာကိုး.. ဒါက ခုမှ အစ မို့လို့ပါ..
နောက်ဆို ကိုကို သတိထားပြီး လုပ်ပါ့မယ် နော်.. စိတ်ကောက်ရဘူးလေ ကွာ..
ကိုကို့ ချစ်လေးက လိမ္မာတယ်.. အာမွ.. ရွှတ်..”
(၁) မုန့်လုံး ရေပေါ်
(၂) ကောက်ညှင်း မုန့်နှစ်
အိုင်ဆေး ကိုမင်းခေါင်.. အလှည့်ကျတော့ မနွဲ့ကြေးးး.. နော့
« Last post by mgbanana on March 22, 2015, 11:56:46 PM »
တစ်ခါက ဝေးလံခေါင်သီလှတဲ့ အညာဒေသရှိ ရွာလေးတစ်ရွာမှ အညာသားတစ်ယောက် မြို့ကြီးတစ်မြို့ အလည်အပတ်သွားပြီးပြန်လာရာ… ရွာမှ သူငယ်ချင်းများက ဘာလက်ဆောင် ပါခဲ့လဲ… ဘာတွေမြင်ခဲ့ တွေ့ခဲ့ ရသလဲ… စသည်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်း မေးမြန်းကြရင်း စကား စမြည်ပြောကြရာ…
“မြို့မှာ ဘယ်လို အထူးအဆန်းတွေ မြင်ခဲ့ တွေ့ခဲ့ ရသလဲ… ကွ” ဟု သူငယ်ချင်းများကမေးရာ…
“မြို့ကလူတွေများ ညစ်ပတ် ချက်ကွာ… ” ဟုပြန်ပြောလေ၏…။
“သူတို့က ဘယ်လို ညစ်ပတ် တာတုံးကွ… ” ဟု သူငယ်ချင်းများက မေးပြန်ရာ…
“ညစ်ပတ် တာတောပြောမနေနဲ့ကွာ… အိမ်သာနက်ထဲ ဝင် ဝင်ပြီး… အီးမဲတွေ ပို့နေသတဲ့… ” ဟု လူတတ်ကြီးလုပ်ကာ ပြန်ဖြေလေသတည်း။
အိမ်သာနက် = Internet
အီးမဲ = Email
« Last post by mgbanana on March 22, 2015, 09:40:14 PM »
“ငါ့သမီး ဤနေ့မှာ မျက်နှာမရွှမ်… ”
ရှေးရှေးတန်းက ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာတွင် လင်မယား နှစ်ယောက်ရှိလေသည်။ သူတို့ဆီမှာ မိန်းမဘက်မှ ပါလာသော မယားပါသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ ဒီလိုနဲ. မိသားစု၃ယောက် အတူတကွနေထိုင်လာရင်း နှစ် လ ရက် တွေကြာလာတော သမီးငယ်မှာ အပျိုကြီးဖါးဖါး ဖြစ်လာပါတော့သည်။
တစ်နေ့တော့ ယောင်္ကျားလုပ်သူမှာ တောင်ယာ လုပ်ငန်းခွင်မှ သိမ်း၍ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ အပြန်လမ်းတွင် မောမောပန်းပန်းနှင့် အရက်ဝင်သောက်နေ၍ မိုးချုပ်ချိန်မှ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ အရက်မူးမူးနှင့် မိန်းမဖြစ်သူ အိပ်ယာသို့ တချိုးတည်း ဝင်ခဲ့ပါတော့သည်... ... ...။
ဒီလိုနဲ့ မနက်ရောက်တော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူမှာ နေမြင့်မှ အိပ်ယာမှထလာပြီး… အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် မျက်နှာ မသာမယာနှင့် ထိုင်နေသော သမီးဖြစ်သူကို တွေ့ရာ…
“ငါ့သမီး ဤနေ့မှာ မျက်နှာမရွှမ်… ” ဟုပြောလိုက်တော့… သမီးဖြစ်သူက…
“ဘယ်ရွှမ် မှာတုံး… အဘ ပဲ ကျမကို… ညတုန်းက… နဖက် ကတော… တာကိုး… ” ဟုပြန်ုပြောလေ၏။
ထိုအခါ ပထွေးဖြစ်သူက ….
“ညက နင့်အမေအိပ်ယာမှာ အိပ်နေတာ နင်လား… ”ဟု မေးလေ၏…။
သမီးဖြစ်သူက… “အေး… ပ… ” ဟု ဒေါနဲ့ မောနဲ့… ပြန်ဖြေလေသည်။
“အမေ ကိစ္စရှိလို့… ဟိုဘက်ရွာသွားတယ်…”
“နေပါဦး… ဒါထက်… ညတုန်းက… နင်ကရော ငါ့ကို ဘာလို့ မကန်တာတုံး… ”
“ကန်လေ… ဝမ်လေ ဘဲ ပ… အဘရာ… ”
“ဟေ… အိမ်းးး… ဒါကြောင့် ကြပ်တာကိုးးး… ” ဟုပြောလိုက်လေသတည်းးး…။
မျက်နှာမရွှမ် = မျက်နှာမရွှင်
နဖက် ကတော = လိုးသည် (ရဝမ် ဘာသာစကား ဟု ထင်ပါသည်)
ကန်လေ… ဝမ်လေ = ကန်လေ… ဝင်လေ
« Last post by မင်းခေါင် on March 19, 2015, 02:37:31 PM »
ပထမနှစ်.......ကျနော် ပြောသမျှကို မိန်းမက နားထောင်ရတယ်..။
ဒုတိယနှစ်.....မိန်းမပြောသမျှကို ကျနေ်ာ နားထောင်ရတယ်...။
တတိယနှစ်... ကျနော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ပြောသမျှကို ရပ်ကွက်လူကြီးက နားထောင်ရတယ်..။
အသက် ၂၅ အရွယ်သည် free size အရွယ်ဖြစ်သည် ။ ကိုယ်ထက် ၁၀ နှစ် ငယ်သော မောင်မောင်တို့ ကိုလည်း ယူလို့ ရသည် ။
ကိုယ့်ထက် အနှစ် ၂၀ ကြီးသော opa များနှင့်လည်း တင့်တယ်သည် ။ ရွယ်တူများကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ ရသည် ။ ထို့ ကြောင့်
အသက် ၂၅ နှစ် အပျိုကြီးမမအရွယ်များသည် မိန်းခလေးများအတွက် အလွန့် အလွန်ကောင်းသော အရွယ်ဖြစ်ပေ၏ ။..
ဟိဟိ..တိုက်ဆိုင်မှု ရှိလျှင် ခွင့်လွတ်ပါ...။
« Last post by မင်းခေါင် on March 16, 2015, 04:17:45 PM »
အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေး မရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက် ကျနော့် ရုံးကို ရောက်လာတယ်..။
သူငယ်ချင်းမ..." ငါကို ကူညီပါဦး မင်းခေါင်ရယ်..ကလေးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.."
မင်းခေါင်......" ရပါတယ်သူငယ်ချင်းရယ်..စိတ်ပူမနေပါနဲ့ ...။ ပထမဦးဆုံး..lux ဆပ်ပြာ တစ်တုံးဝယ်..ပြီးရင် lotion ကောင်းကောင်း တစ်ဗူးဝယ်...
နောက်..ငါ့ ဖုန်းနံပါတ် လိုက်မှတ်ထားလိုက်...."
သူငယ်ချင်းမ..." အေး...အဲ့ဒါတွေ ၀ယ်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ..မင်းခေါင်ရဲ့ ..."
မင်းခေါင်......" ပထမဆုံး..lux ဆပ်ပြာနဲ့ ရေချိုးလိုက်...ပြီးရင် တကိုယ်လုံး lotion လိမ်းလိုက်...အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ နင်..ငါ့ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်..
" တေဂျင်းဇိုး....မတာ...$#^@ "
« Last post by မင်းခေါင် on March 16, 2015, 03:51:02 PM »
စစ်ဗိုလ်အရာရှိကြီးက သူ့ သားကို " စစ်သွေး " လို့ နာမည်ပေးလိုက်တယ်...။
ရဲ အရာရှီကြီးကလည်း သူ့ သားကို " ရဲသွေး " လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်...။
မီးသတ်ဗိုလ်ကြီးကလည်း အားကျမခံ သူ့ သားကို နာမည်ပေးလိုက်တယ်.....။
" မီးသွေး. ".
အရက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်နေတဲ့ အရက်သမားတစ်ယောက် ( ဦးထွန်းအေး မဟုတ်ပါ ) ကို ဆရာဝန်က မေးမြန်းကြည့်နေခြင်း ဖြစ်သည် ။
ဆရာဝန်......" ခင်ဗျား အရက်သောက်လာတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ.."
အရက်သမား." အနှစ် သုံးဆယ်. "
ဆရာဝန်....." အနှစ်သုံးဆယ် အတွေ့ အကြုံထဲကနေ အရက်ရဲ့မကောင်းပုံလေး တစ်ခုလောက် ပြောပြပါလား..စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်
ပြောပြတဲ့ အရက်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အကြောင်းကို သိချင်လို့ ပါ...။